Maxay Itoobiya u sheegtay horjooge Muuse Biixi - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Maxay Itoobiya u sheegtay horjooge Muuse Biixi
Waxa maanta magaalada Hargeysa yimi ku simaha wasaarada arimaha dibedda Ridwaan Xuseen waxana uu sidey fariin ka timi sirdoonka Itoobiya guud ahaan ayadoo ay jiraan hub qarsoodiya oo la soo geliyo dawlada Somali galbeed.
Horjooge Muuse Biixi iyo maamulkiisa ayaa ku xirnaa Tigreegii xukunka laga tuuray ayagoo ka sugayay ictiraaf dhinaca kalana ku raacsanaa qaska ay ka wadaan Koofurta dalka.
Wararka aanu helayno ayaa sheegaya in loo sheegay horjooge Muuse Biixi inuu ilgaara ku eego hubka qarsoodiga ee soo galaya dawlada Somali galbeed haddii kale ay dawlada Itoobiya talaabo qaadi doonto.
Horjooge Muuse Biixi ayaa markiiba dalbadey in la soo celiyo wakiilkii Itoobiya ee fadhiyay Hargeysa, Itoobiya si caadiya u isticmaasho dekeda Berbera oo uu booqday ku simaha wasiirku.
Horjooge Muuse Biixi iyo maamulkiisa ayaa niyad jabsanaa intii Cabi Axmed xukunka qabtey ee uu joojiyay in la farogeliyo arimaha siyaasada ee dalka Somaliya guud ahaan iyo weliba la macaamilka maamul jufeedyada.
Iska hadle ma dhuusaad Somaliland ku toogan, ama horjooge ku ku ama waxaas doonto, waxase cad in xaarmaajo ay u dhamaatay, ogow ethiopia Somaliland kama baqdo, nama fara galim karto, ciidamo kama joogaan Somaliland jaahilyahow